जीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी राशी हुनेहरु ! - Babal Khabar
यिनीहरुलाई देखेर मनमा यो कुरा आउन सक्छ कि यिनीहरुमा त्यस्तो के गुण छ त ?
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केहि राशिका व्यक्तिहरु हुन्छन् जसको भाग्य निकै बलियो हुन्छ | यतिमात्र होइन यिनीहरुको भाग्यको असर उनीहरुको जीवन साथीमा पनि पर्छ |
सिंह राशि सूर्य सिंह राशिको स्वामी हो। सूर्यलाई ज्योतिष शास्त्रमा सौभाग्य र उर्जाको प्रतीक मानिन्छ। यो राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो उर्जाको कारण सौभाग्य प्राप्त गर्छन्। यस राशिका मानिसहरु आफ्नो सामर्थ्यशाली व्यक्तित्वको साथ समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँन सफल हुन्छन्।
वृश्चिक राशि मंगल ग्रह वृश्चिक राशिको स्वामी हो। यस कारणले गर्दा, यी मानिसहरू बुद्धिमान हुन्छन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो बुद्धि र विवेकको कारण विश्वलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। साथै, भाग्य पनि सँधै यिनीहरुको साथ हुन्छ। यो पनि पढनुस प्रायः युवतीहरू मीठो बोल्ने केटाको कुरा छिट्टै पत्याइहाल्छन् र धो’का खान पुग्छन् ।
तर अलिकति दिमाग लगाउने हो भने धो’केबाज केटाको बारेमा थाहा पाइहालिन्छ । तल लेखिएका कुरा पढेर तपाईं धो’कामा पर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
प्रायः केटाहरूले युवतीलाई भेट्नेबित्तिकै आफ्नोपन देखाउँदै मीठो मीठो कुरा गर्न थालिहाल्छन् ।कति राम्री भन्दै तारिफ गर्न थालिहाल्छन् । अनि युवतीलाई कस्तो राम्रो केटो रहेछ भन्ने लाग्छ । तर वास्तवमा ऊ राम्रो मान्छे नहुनसक्छ ।
फ्लर्ट गर्न माहिर र धो’कबाज चरित्र भएका युवकहरू मीठो बोल्न माहिर हुन्छन् । मीठो कुरामा फ’स्ल्याङफुस्लुङ पारेर युवतीलाई पट्ट्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ ।
यस्ता मान्छे मोबाइलमा झु’ण्डिएर बसेका देखिन्छन् तर उनीहरूको इनबक्स हेर्नुभयो भने प्रायः खाली नै हुन्छ ।
यस्तो व्यवहार देखायो भने त्यो मान्छेबाट टाढै रहनु ठीक हुन्छ । तपाईंसँग सम्बन्धित कुरामा ला’परवाही देखाउने, तपाईंका महत्वपूर्ण दिनहरू, जस्तै जन्मदिन, बिर्सने अनि जे पायो त्यही बहाना बनाउने मान्छे पनि धोकेबाज हुन्छन् । यस्तालाई भरोसा गर्नु ख’तरनाक हुन्छ ।
Prevयी सपना देख्नुभयो भने मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा, चाडै बन्नुहुनेछ मालामाल !
nextपति-पत्नीको एउटै राशि छ ? यी राशिको हुन्छ उत्कृष्ट जोडी, यी राशीको खराब !